Archive du 20190107
Tolon’ny 13 mey Nahery vaika ny fampiasan-kery
Voadaroka baomba mandatsa-dranomaso indray ny vahoaka mpitaky ny fahamarinana tonga marobe teny Analakely ny sabotsy 5 janoary teo.
Tsiambaratelo fonosin’ny fifidianana Ny talen’ny tranomprintim-pirenena no tena mahalala azy
Miteraka disadisa goavana eo amin’ny mpanohana ny kandida laharana faha-25 sy ny faha-13 hatreto ny fitadiavana ny tena fahamarinana mahakasika iny fifidianana filoham-pirenena notanterahina nanomboka ny volana novambra taona 2018 lasa teo iny.
Komitin’ny fampihavanana Malagasy “Tsy mifamono izany ny Malagasy”
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny dia nanome hafatra amin’ny maha raiamandreny azy ny avy eo anivon’ny komitin’ny fampihavanana Malagasy.
Malagasy any Etazonia sy Frantsa Nihetsika ihany koa
Tsy eto Madagasikara ihany fa efa tonga hatrany ivelany ny hetsika fitakiana ny fahamarinana mikasika ny voka-pifidianana .Namoaka fanambarana ireo vondron’ny Malagasy monina sy miasa any Etazonia ny faran’ny herinandro teo mba ho fanajana ny tena safidim-bahoaka marina.
Resaka “cocktail Molotov” Tetika maloto handravana ny tolona…
Fomba fiady hoenti-mandrava ny hetsi-bahoaka mitaky ny fahamarinana ny fampiasan-kery fa eo ihany koa ny fandotoana.
Korontana eto Afrika Ao ambadika foana ny “Frantsa-Afrika”
Ara-tantara, niroso tamin`ny fanjanahantany ny frantsay tamin`ny taonjato faha-19. Taorian`ny ady lehibe faharoa dia betsaka ny firenena zanatany nangalana miaramila niady nanafaka an`i Frantsa tamin`ny alemana ka teo no nitsiry ny fanomezana fahaleovantena.
Antoko Tambatra « Foany io fifidianana feno hosoka io »
Tsy takona hafenina intsony fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena ary an-dalana mankany amin’ny krizy vaovao indray isika, hoy ny antoko Tambatra.
CNIDH Miantso ny HCC ho tena mahaleotena
Manamafy ny voalazan’ny andininy faha-5 amin’ny lalàmpanorenana ny Kaomisionina nasionaly momba ny zon’olombelona (CNIDH) fa eo am-pelatanan’ny vahoaka ny fiandrianam-pirenena, ny loharanon’ny fahefana,
Mamay be io aa…
Hay dia efa nanomboka ny arôzazy ianareo ry jean kely a.Mazava ny resaka fa dia tena efa azonareo antoka fa matinareo ny baolina.
Zon`olombelona Mila mandray fepetra ny fitondrana amin’ny fampanajana azy
Mitohy hatrany ny antsojay ataon`ny fitondrana amin`ireo tsy mitovy hevitra aminy satria tsy manana zo haneho hevitra mikasika ny raharaham-pirenena ny vahoaka Malagasy ary voatampim-bava tanteraka.
Antananarivo Rotsak’orana 30 minitra dia efa dibo-drano
Na dia teo aza ny fanadiovana sy fanamboarana ireo tatatra, orana 30 minitra dia efa maha dibo-drano toerana maro eto Antananarivo Renivohitra.
TAONA 2019 Ho taona tsara, hoy ny Andriana Randrianatoandro Robert
Nanambara ny ho fizotry ny fiainam-pirenena mandritra ny taona 2019 ny Andriana Randrianatoandro Robert mpanandro sady mpitahiry ny hasim-piandrianana ao amin’ny Tranoben’Imerina eny Ambohimanga.
Rallye Dakar 2019 Lucas Barron “Trisomie” voalohany handray anjara
Hanamarika ny tantaran’ny Rallye Dakar hatramin’izay namoronan’i Thierry Sabine azy tamin'ny taona 1978 ny handraisan’ilay teratany Peroviana,
Fahamarinana, fahamarinana ! Teny malaza sy nankalazaina io tao anatin’izay volana maromaro izay.
Sary hosodoko Manomboka mahaliana ny tanora Malagasy
Manomboka mahaliana ireo tanora eto amintsika ny sary hosodoko. Marobe tokoa mantsy ireo tonga mitsidika ilay hetsika Fangaro II tanterahina etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely
NIHARAN-DOZA I YZIT
Niharan'ny lozam-pifamoivoizana ilay mpanakanto malagasy malaza Yzit. Avy any Corse (Bastia) izy ary hitodi-doha hody any an-tranony no nitranga ilay fifandonana tamin'ny fiara hafa. Mba tsy naninona loatra izy raha miady amin'ny fahafatesana kosa ny mpamily ilay fiara nifandona taminy.
Black Nadia mpihira Tsy nanadino ireo sahirana manodidina azy
Tsy manadino ireo olona sahirana manodidina azy, indrindra fa ireo ankizy madinika tsy manan-tsiny i Kantoniaina Ornella Edith Nadia na i Black Nadia mpihira amin’izao taona vaovao 2019 izao.
Gidragidra tany Antsirabe Nirefodrefotra ny Lakrimozenina…
Niaina tao anaty savorovoro tanteraka ny mponina nanodidina an’i Vatofotsy Antsirabe sy iny lalana mihazo an’Ambano iny nandritra ny roa andro izay.
Dosie maro nahiana misy kolikoly Tsy re intsony ny tohiny
79 ireo dosie nampiahiahy fa misy kolikoly izay narahi-maso teny amin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (BIANCO) tamin’ny taona 2017.
INSTAT Hifarana anio ny fanadihadiana EPC
Tokantrano miisa 17 750, izay ao anatin’ny toeram-piasana 450, anatin’ny faritra 22 manerana ny nosy no nanaovana fanadihadiana mahakasika ny fanadihadiana EPC (Enquête post censitaire de couverture)